UZachary Taylor - UMongameli waseMerika amaNyaniso
Zachary Taylor Iinkcukacha ezifutshane
UMongameli we-12 we-United States
UZachary Taylor (1784 - 1850) waba ngumongameli weshumi le-12. Nangona kunjalo, wafa emva nje kancinci ngaphezu konyaka. Eli phepha linikeza uluhlu olukhawulezayo lwezinto ezikhawulezayo zikaZachary Taylor. Ukufumana ulwazi oluthe xaxa, ungaphinda ufunde iZachary Taylor Biography okanye izinto ezi-10 eziphezulu zokuzi malunga noZachary Taylor .
Novemba 24, 1784
Julayi 9, 1850
Matshi 4, 1849-Julayi 9, 1850
Inani leMigaqo ekhethiweyo:
Ithenda 1; UZachary Taylor wafa emva kokukhonza okungaphantsi konyaka eofisini. Oogqirha bakholelwa ukuba ukufa kwakhe kubangelwa yi-k'holera morbus esivumelwaneni ngokutya isitya se-cherries kunye nokusela imbiza yobisi lwe-iced ngosuku olushushu. Kuyathakazelisa ukuba umzimba wakhe waxoshwa ngoJuni 17, 1991. Kwakukholelwa ngababhali-mlando ukuba mhlawumbi wayebanjelwe ubuthi ngenxa yokumelana nokuvumela ubukhoboka ukuba bufikelele kumazwe aseNtshona. Nangona kunjalo, abaphandi bakwazi ukubonisa ukuba wayengenayo inetyhefu. Kamva wabuya wabuya wabuya e-Louisville, e-Kentucky mausoleum.
UMargaret "Peggy" uMackall Smith
"Ukuguga Kwakudala kwaye Kukulungele"
Zachary Taylor Quote:
"Kuya kuba bubulumko ukusebenzelana neendlunkulu kumntu onqabileyo."
Iziganeko Ezinkulu Nangona e-Ofisi:
UZachary Taylor wayedume e-United States ngaphambi kokuba abe ngumphathi weqhawe lomfazwe.
Wayelwile kwiMfazwe ka-1812, iMfazwe yaseNew Hawk, iMfazwe yesiBili yeSininole kunye neMfazwe yaseMexico naseMelika. Ngomnyaka we-1848, wakhethwa yiQela le-Whig njengomviwa waloo mongameli nangona wayengekhoyo kwindibano kwaye akazange afake igama lakhe phambili. Okumangalisayo kukuba, waxelelwa ngeteksi yokutyunjwa.
Nangona kunjalo, akayi kuhlawula i-postage ngenxa kwaye akafumananga ukuba nguye otyunjelwe kude kube ngeveki kamva.
Ngethuba lakhe elifutshane lokuba ngumongameli, isiganeko esiyintloko senzeke yiyimihlathi yeSivumelwano seClayton-Bulwer phakathi kweUnited States ne-Great Britain. Umnqophiso ojongene nomgangatho weenkoloni kunye nemigodi emazweni aseMntla Merika. La mabini amazwe avumile ukuba ukususela ngaloo mhla, yonke imingxube ayiyi kuba neqela. Ukongezelela, amazwe omabini asho ukuba abayi kukoloniza nayiphi na inxalenye ye-Central America.
Ezihlobene neZachary Taylor Resources:
Ezi zixhobo ezongezelelweyo kuZachary Taylor zinokukunika ngolwazi olungakumbi malunga nomongameli namaxesha akhe.
Eli nqaku lithatha ngakumbi ukujongwa kumongameli we-12 we-United States kuquka nexesha lakhe njengeqhawe lemfazwe. Uya kufunda kwakhona ngobuntwaneni bakhe, intsapho, umsebenzi wokuqala, kunye neziganeko ezinkulu zokulawula kwakhe.
Isatifiketi sooMongameli kunye nabaPhini boMongameli
Le ngxowa enolwazi inika ulwazi olukhawulezayo malunga nabaongameli, i-vice-presidents, imimiselo yabo yeofisi kunye namaqela abo ezopolitiko .
Eminye imiba ebalulekileyo kaMongameli:
Uluhlu lwabaMongameli baseMerika
IGeorge Washington Facts Fast
AbaPhathi abakhulu kunabo bonke kwimbali yaseMelika
UGeorge Washington: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
UHelena, uMama kaConstantine
Isikhokelo soMngcipheko weNzululwazi yeFayili
I-COHEN Igama lokugqibela igama kunye nomvelaphi
Uluphi uhlobo lweeNgoma zoLungiso?
Ukulungiswa kwiNtsapho eNgcwele
Indlela 'Yokuthetha' Imozulu Yokubikezela
5 Iingcamango ezibhaliweyo zokubhala
Imbali YaseYiputa yaseYiputa: iMastabas, i-Pyramid yasekuqaleni
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseKentucky
Ngaba UbuBuddhism Logical?
Ubudlelwane bamandla "kwiSiphepho"
5 Amacandelo okulungiselela ukulungiselela i-ISEE ne-SSAT